I-Anime Ephikisana Kakhulu Ebangele 'Intukuthelo Yomphakathi' - Okunye
Imibukiso Ephikisana Kakhulu Yama-Anime Eyadala “Intukuthelo Yomphakathi”
Impikiswano yama-Anime imvamisa umthwalo wama-bollocks ku-inthanethi. Akukho nokukodwa okungokoqobo noma okungokoqobo.
Kepha lokhu yi ukuthambekela nge-anime ezisekelweni ezinjenge-Twitter.
Akuhlalanga njalo nge-Twitter nokho. Uthola amawebhusayithi adala impikiswano ngalutho ngoba uqobo inzondo anime.
Imvamisa amawebhusayithi (nabantu) abangeyona ngisho ingxenye yomkhakha. Noma unakekele i-anime nakancane.
Ama-Anime akhombisa ukuthi kubuyela emuva
Nalu uhlu lwezinhlelo ze-anime okufanele uzisho ezibangele intukuthelo yomphakathi.
Futhi okunye okushiwo okuhloniphekile ekupheleni kwalokhu okuthunyelwe.
IDarling In The Franxx ingenye ye-anime ENKULU kakhulu kule minyaka eyishumi esiyibonile. Noma ngisho eminyakeni engama-20 + edlule.
Emuva ngo-2018 kwakuyi-anime kuphela engangiyazi kwalokho kufinyelele ku uyahlanya Izinga lokuthandwa, elifana ne-Attack On Titan ngaleso sikhathi.
Ngisho noViolet Evergarden ubengeke aqhathanise nayo, Kepha ngiyeka ukuphuma.
Ulayini odumile 'othandekayo' uxhume wonke umuntu emphakathini we-anime. Futhi uZero Two waba yi-waifu Ngokuphazima kweso.
Bese kuthi i-DITT ivinjelwe eChina
' I-Studio Trigger ne-A-1 Izithombe ‘Iphrojekthi entsha ye-anime kule sizini, UKUDLALA ku-FRANXX , ithola ukunakwa okuningi kubalandeli nabagxeki ngokufanayo. Kepha lokho kunakwa okuningi kuhloselwe izimo zayo eziyela ngasocansini.
Lezo zimo eziyela ngasocansini kukhombise ukuthi kunzima kakhulu ukukwenza I-China , njengoba bevimbe umbukiso kusayithi elilodwa lokusakaza. '
I-China yaziwa nge ukuvinjelwa imibukiso eminingi ye-anime ishiywe kwesokudla naphakathi nendawo. Ngoba iChina inzima ngokunemba kwezepolitiki nokuzwela emithonjeni yabo yezindaba.
Bavimba iDarling In The Franxx ngezingqikimba zabo zocansi 'eziyela ngasocansini'.
Futhi lokho kwakumane kuyisiqalo
Isigaba esilandelayo sempikiswano kaDarling In The Franxx kwaba izinsongo zokubulawa ezivela emphakathini uqobo.
UZero Two no-Ichigo babenesigameko esikhulu lapho u-Ichigo enza konke okusemandleni akhe ukudala inkinga.
YILOKHU okuholele ekutheni abantu bahambe balinganise izinto ezingamampunge futhi bangabe besakwenza okunye uma konke sekwenziwe.
Darling Ku-Franxx kwaba nempikiswano kusukela ekuqaleni. Izindikimba eziyela ngasocansini zochungechunge lweMecha ziyinqaba.
Kimi lokho bekuyingxenye yokuthandeka kwayo, kepha njengoba i-anime yathuthuka kakhulu, kwavele kwaba kubi kakhulu.
'Intukuthelo' yayiphathelene kakhulu ubulungiswa bezenhlalo iqhawe * t lokho kujwayelekile kwi-intanethi kulezi zinsuku. Kepha kwaba njalo enkulu ngesikhathi senzeka ngo-2018.
UGoblin Slayer ungenye i-anime lokho kudale ukuhlukumezeka okukhulu nentukuthelo yomphakathi.
Njengoba sonke sazi ngoGoblin Slayer - isiqephu sokuqala se-anime siyimpikiswano, sinamandla, futhi sibophezelekile ukuba sihlikihlwe ezinye abantu ngendlela engafanele.
Ngemuva kwakho konke - owesifazane 'uyaphulwa' futhi sonke siyazi ukuthi abantu baseMelika basabela kanjani ezintweni abangazithandi….
Lokho kuholela ekutheni isixuku seTwitter silahlekelwe yimicabango futhi sikhala ngesiqephu sokuqala. Futhi kwenzeka kanjani ukuthi kuthiwe ucansi, i-misogynist, nawo wonke amanye amagama e-buzz entshonalanga.
Njengecala nje kuDarling In The Franxx, ekugcineni bekungabantu nje abangabalandeli ngisho be-anime abakhomba iminwe ngoba akukho abangakwenza kangcono.
Noma ngamanye amagama - amakholoni abazama ukuphoqelela imibono yabo kwamanye amazwe ngoba 'bengavumelani' nobuciko babo noma ukuthi benza kanjani izinto.
Okuhlobene: Inkinga Ngobulili be-Anime AKUKHO MUNTU Ofuna Ukuvuma
3. Inkemba Art Online: Alicization
Ngicishe ngakhohlwa ngalesi sehlakalo ikakhulukazi kusuka kwisizini ye-SAO 3. Lapho kuqhela kancane emgqeni we-anime, u-Eugio uzithola esesibophweni.
Abalingiswa ababili besifazane: oTiese noRonye bagcina bebhekene nama-weirdos amabili bebodwa, okuvele kube yisinqumo ESIMBI.
izibopho kanye ne-ronye sao
inkemba art online alicization isiqephu 10
u-eugio sao uyaxakeka
Kamuva - u-Eugio uzama 'ukusindisa' uTiese noRonye ngemuva kokubona ukuthi iziqhwaga zabo zikuluphi uhlelo.
U-Eugio uphoqelekile ukuthi abuke engenakuzisiza njengoba bezama 'ukudlwengula' omunye wabalingiswa ukuthola umyalezo wabo. Inhloso yabo ukuhlupha u-Eugio futhi abafake bonke esihogweni.
Njengoba ngikwazi ukuqonda - lesi sigcawu sasihlolwe kwezinye izinsizakalo zokusakaza. Futhi i-anime ithole ukuhlukunyezwa okuningi ngokwenzekile ngesikhathi leso siqephu.
I-Twitter ngaphezu kwanoma ubani omunye ilahlekelwe yingqondo futhi YouTubers kwesobunxele nesikhungo babekhuluma ngakho.
Noma ngabe yikuphi ukuma kwakho kulokhu - akukubi ukwedlula isiqephu seGoblin Slayer. Futhi womabili ama-anime aziwa ngemvelo yawo emnyama njengoba enjalo. Yize abagxeki abangu-99% babengekho ngisho abalandeli be-anime njengenjwayelo.
Lokho ngaphandle kwephuzu nokho.
4. Ukuphakama Kweqhawe Lesihlangu
Impikiswano yeRising Of The Shield Hero yehluke kancane kwiSAO nakuGoblin Slayer. Kepha okuxakayo ukuthi kwenzeke kungekudala ngemuva kokubili (yize yasakazwa ngoJanuwari 2019 ukuba ibe nobulungiswa).
Esiqeshini sokuqala salokhu Isekai anime series , UNaofumi Iwatani usolwa ngephutha 'ngokudlwengula' nokuhlukumeza ngokocansi.
Icala - Okwami une-ajenda efihliwe, futhi usebenzisa impikiswano ukubhubhisa uNaofumi futhi asizakale lapho enza lokho.
Lezi zinhlobo zezinto zenzeka emhlabeni wangempela, ngakho-ke ngu-r iyahleleka futhi iyaqondakala. Ikakhulukazi ngakho konke lokhu 'kwesifazane' entshonalanga nabesifazane abanobuthi abazokwenza noma yini ukubhubhisa amadoda ngamandla ezepolitiki.
Futhi nokho - yilokhu okwadala ukuqubuka nempikiswano noShield Hero.
Ingxenye engiyithandayo ye-Shield Hero AMA impendulo yokuthi 'kuthiwani ngempikiswano' ngokuthi 'iyiphi impikiswano?'
- Jeko (@JekoJekoUEM) Februwari 10, 2019
Ukukhuphuka Kweqhawe LeShield Kwakungekho Izingxabano Ezithukuthele EJapan, Umkhiqizi weKadokawa | #ROTSH #Ukuvuka kweqhawe lesihlangu #Izilwane #Isisekelo seJapan https://t.co/jmULB2E7Xt pic.twitter.com/hSYVCgKEis
- I-Angry Gamer (@OneAngryGamerHD) Februwari 11, 2019
Abesifazane, noma kufanele ngithi - iqembu le- Abesifazane akawuthandanga umyalezo.
Bahambe baze bathi 'lokhu akwenzeki empilweni yangempela'. Yimuphi umuntu ophilile owaziyo ukuthi isitatimende asinasisekelo empeleni.
Abesifazane abamsulwa kuze kube kutholakala ukuthi banecala, kanti abesilisa banecala kuze kutholakale bengenacala.
Lokho kukhombisa umzila i-anime enqume ukuwuthatha.
Kepha ukubuyela emuva akuzange kuthetheleleke ohlelweni olukhulu lwezinto, ngoba futhi - lokhu kwakunguSJW ’entshonalanga bezama ukuphoqa imibono yabo eJapan.
Abantu abangabalandeli be-anime kwasekuqaleni.
Okuhlobene: Ukuhlukumeza Kodwa Izifundo Zokuphila Ezidingekayo Okufanele Zifundwe KuKuphuma Kwamaqhawe Esihlangu
5. Ababuyekezi be-Ishuzoku
Le akuyona i-anime okwamanje. Uchungechunge lwamaManga olulungiswa ungene ku-anime.
Lokhu kumenyezelwe nge-Twitter ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
Ngishicilele i-athikili mayelana nayo ibikezela ukuthi i-anime izothola ukubuyela emuva ngoJanuwari 2020 uma isiphumile.
Into exakayo - sekuvele kudlula emuva emuva kancane njengoba sikhuluma.
Uyazi yini? Ngizwile abaningi bekhononda ngalokhu ukuthi ukumelwa kabi kwabesifazane kepha niyakwazi engikubonayo? Abesifazane abehlukene bazo zonke izinhlobo, osayizi, ukuma kanye ne-Ages baphathwa ngendlela efanayo… Ngilungise uma nginephutha kodwa lokho kubizwa ngokuthi 'Ukulingana' akunjalo? #IshuzokuReviewers pic.twitter.com/yqEzgynUiB
i-anime ehamba phambili yesikhathi sonke
- & # x1f3b6; Anginaphutha, ngingumsebenzi ku-Progress & # x1f3b6; (@Soul_Resonance) Novemba 4, 2019
Futhi njengoba usungaqagela nje - I-Twitter iyiselelesi futhi. Ngoba 'okukhona' yilokho kuphela okudingeka ukwenze ukucasula laba bantu bese uba sohlangothini lwabo olubi.
Ngokusobala izoveza abesifazane ngokuhle ngenkathi ithinta lezi zihloko ezibucayi (ezikhona).
Noma ngizovuma kuleli cala ngingaqonda ukuthi kungani abantu 'belahlekelwa yingqondo' ngenxa yalesi simemezelo esisha se-anime.
I-anime isuselwe kwizifebe zamantombazane ezi-monster.
Umlingiswa oyinhloko uhambela izindawo zobufebe ezahlukahlukene nezinhlanga ezahlukahlukene zamantombazane, ngakho-ke anganquma ukuthi yiluphi uhlobo lowesifazane 'oluhamba phambili'.
Futhi-ke - kunjalo kuphela uchungechunge lwe-Ecchi (olwamangaza abalandeli be-anime njengami).
Kodwa intukuthelo yomphakathi intukuthelo yomphakathi.
Asikakuboni okokugcina kokuzayo nabahlaziyi be-Ishuzoku. Futhi impikiswano ezovela kuyo ngo-2020.
UNeon Genesis Evangelion.
Ukubuyiselwa Kwe-MMO Junkie.
I-Bizarre Adventure kaJojo.
I-Random Fandom Yobuthi, Nempikiswano Yokuzibulala
Lokhu Kungakho Abakwa-SJW BANGEKE BABHIDLISE Imboni Yama-Anime